Global Voices teny Malagasy » Adin’ny Raozy Any Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Mey 2014 7:29 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Tantara, Akon'ny RuNet
Eo ivelan'ny Kremlin mihitsy, misy kianja ho an'ny daholobe antsoina hoe Zaridaina Alexander , izay ahitanao tsangambato maro fahatsiarovana ny nandresen'ny Firaisana Sovietika an'i Alemana mpanao jadona, hita ao koa ny rindrina vita taminà takela-bato natolotra manokana ho an'ireo “tanàna 12 maherifo ” tamin'ny ady. Talohan'ny nandraisan'i Rosia an'i Krimea tany ampiandohan'ity taona ity, dia tanindrazan'ny ” tanàna maherifo” telo samihafa i Okraina. Ankehitriny, taorian'ny fanjavonan'i Sevastopol, tanàna roa tahak'izany sisa no any Okraina: Odessa sy Kiev. Taorian'ny afo namono olona tamin'ny herinandro lasa teo tany Odessa, sy ny fifandirana nandritra ny volana maro nisy teo amin'i Moscow sy Kiev, tsy mahagaga raha tafiditra ao anatin'ny zavatra tsy maintsy ataon'ny politika Rosianina ny fahatsiarovana ireo tanàna maherifo. Andro maromaro lasa izay, andian'olona roa no nandravarava ny Zaridaina Alexander, nisy hafatra maro tiany havoitra tamin'izany.
Tamin'ny5 May 2014, olona maherin'ny 7 arivo no voalaza ho hita  nifamory teo anoloan'i Kremlin mba haneho fanohanana an'i Odessa, Kramatorsk, sy Slaviansk, nisy iray minitra fahanginana ho an'ireo olona niharan-doza tamin'izay noheverina ho tsy fahombiazan'ny governemanta Okrainiana. Nanatrika io fihetsiketsehana io ny solombavam-bahoaka ao amin'ny Duma, avy amin'ny “Rosia Miray”, antoko politika eo amin'ny fitondrana ankehitriny, nisaotra ireo tonga mba hanaingo ny finiavan'i Rosia hikatsaka ny fahatsaran'ny fiainan'ny Okraniana. Tonga nitondra voninkazo ny olona, nanarona ny rarivaton'ny Odessa tamin'ny raozy sy labozia maro.
Toa tsy nisy na iray ary, nitondra voninkazo ho an'i Kiev. Ny andron'ilay fihetsiketsehana ho an'i Odessa, nandefa sarin'ilay rarivato natokana ho an'i Kiev tao amin'ny Zaridaina Alexander, tsy nisy voninkazo na dia iray aza, ilay mpaka sary Evgeny Feldman. Io no hany tanàna maherifo tsy nisy voninkazo tao amin'ilay kianja. Toa tsapa tsy fa tsy natao ho toy ny tanàna malaza intsony i Kiev, izay nipoiran'ny revolisiona nandrodana ny fitondrana mpiara-dia amin'i Moscow vao tsy ela akory izay. Tamin'ny niampangan'i Kremlin an'i Kiev ho nànana “tsy fandraisana andraikitra bevava ” tamin'ny namelàny ireo olona maro ho may sy matin'ny afo tao Odessa, fanamelohana mahery ny tsy fanomezana raozy ho an'io tanàna io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/05/08/59675/
 Zaridaina Alexander: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Garden
 tanàna 12 maherifo: http://en.wikipedia.org/wiki/Hero_City
 no voalaza ho hita: http://www.interfax.ru/374947
 tsy fandraisana andraikitra bevava: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/17AE5C8FB27DD32944257CCC006F507E